Public Health in Myanmar: ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရင်လို နေလို့ရသလား။ Is it safe to live as before during pregnancy?
clearly for your message, thanks for all!
Oo Mg said...
ဆရာရဲ့ ရေးသားချက်တွေနဲ့ အကြံပြုချက်တွေကိုဖတ်ရတာအရမ်းပဲဗဟုသုတရစေပါတယ်..ခေတ်ဆန်တိုင်းမကောင်းဘူးဆိုတာကိုအားလုံးသောသူတွေနားလည်ပီးမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ နွေးထွေးသာယာမှုကိုလက်ခံပီးပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်မှုဘ၀ကိုထူထောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်..ဆရာကျန်းမာရွှင်လန်းပီးစာများများရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား...
ကျွန်တော် masturbate လုပ်တာများပါတယ်ဗျာ အခုနောက်ပိုင်း သုတ်ထွက်တာ တော်တော်နည်းသွားပါတယ် သုတ်ထွက်ပြန်များလာအောင် ဘာဆေးစားရမလဲ ဖြေကြားပေးပါဆရာ ...
ကလေးကောရ ဖို့ လွယ်ပါ့မလားဆရာ
Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/01/masturbation.html ကို ဖတ်ပါခင်ဗျား။ စိုးရိမ်စရာမ ရှိပါ။ အိမ်ထောင်ပြုရင် ကလေးအဖေလည်း ဖြစ်မှာပါ။